सागर चन्द काठमाडौं, ३ असाेज
संविधानले स्विकार गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा ‘ढिलासुस्ती’ भएको छ । २०७२ मा जारी संविधानले तीन तहका सरकार सहित संघिय शासन प्रणालीलाई स्विकार गरिसकेको छ ।
संविधानले सत्ता र शक्ति सहितको संघीयता कल्पना गरेको भएपनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले अधिकार पाएका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार कुण्ठित गरेको छ ।
संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकार परियोजना हडप्नेसम्मका काम गरेको छ । गत वर्ष २१ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश १, ३ र सुदुरपश्चिमका विभिन्न सडक परियोजना हडपेर आफू मातहत ल्याउने निर्णय गर्यो ।
१, ३ र सुदुरपश्चिम प्रदेशले आ–आफ्ना सडक परियोजनाका लागि बजेट समेत विनियोजन गरिसकेका थिए । तर, संघ सरकारले प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेट सहित परियोजना आफू मातहत ल्यायो ।
गत वर्ष १० माघमा प्रतिनिधि सभामा ‘शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ दर्ता भयो । उक्त विधेयकमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री भन्दा बढी अधिकार र शक्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ)लाई दिने प्रस्ताव गरियो ।
राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक युग पाठकले सरकारको यो कदमलाई ‘मुख्यमन्त्रीको ताजमाथि सीडीओको तरवार’को रुपमा अथ्र्याए । यता सरकारले भने जिल्लामा संघ सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा सीडिओलाई अथ्र्यायो ।
सीडीओलाई आफूभन्दा माथि राखेको भन्दै मूख्यमन्त्री नै आक्रोशित भए । संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत संसदमा दर्ता भएको उक्त विधेयक अहिले पनि संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ गत वर्ष फागुनमा रक्षा मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भयो । यो विधेयकको प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालसम्मको अधिकार दिएको भन्दै आलोचना भयो ।
व्यवहार मात्रै होइन बोली पनि संघीयता विरोधी !
संघ सरकारको व्यवहार मात्रै होइन बोली पनि संघीयता विरोधी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बारम्बार संघीयताको मर्म विपरीत बोलिरहन्छन् ।
धादिङमा अप्टिकल फाईबरको उद्ध्घाटन गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार संघीय सरकारकै इकाइ भएको दाबी गरे ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा मात्रै होइन संसदमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघ सरकार मातहतको सरकार भएको वक्तव्य दिएका थिए ।
२४ वैशाखमा संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघ सरकार मातहतको सरकार भएको दाबी गरेका थिए ।
संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘अहिले ७ सय ६१ सरकार छन, कुन सरकारले के गर्ने, सबै स्वतन्त्र सरकार होइनन् । संघीय सरकार र संघीय कानुनको मातहतमै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुन्छन् ।’
यतिले मात्रै नपुगेपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको विषयमा अलमल नराख्न भन्दै भने, ‘स्वतन्त्र सरकार त होइनन् नि । ती संघीय सरकारकै मातहत हुन् । यस्तो कुरामा अलमल राख्नुहुन्न ।’
प्रधानमन्त्री मात्र होइनन् सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आफ्नै मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संघ सरकारको इकाई नै भने । उनले भने, ‘एउटा सग्लो देशबाट प्रशासनिक फरक इकाइको हिसाबले कामकाज वितरण गरिएको हो । केन्द्रीकृत देशलाई हामीले विभिन्न तीन तहको सरकारमा मान्यता दियौं । सरकार त नेपालमा एउटै छ नि, त्यो हो नेपाल सरकार ।’
प्रधानमन्त्री र सरकारका प्रवक्ता मात्रै होइनन्, गृहमन्त्री पनि संघीयताविपरीत बोलिरहन्छन् । १४ वैशाखमा प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर पुगेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रदेश सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) राख्न नपाउने बताए ।
संविधानको मर्म विपरीत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई शक्तिशाली बनाउने विधेयक संसदमा पेस गरेपछि व्यापक आलोचना खेपिरहेको सरकारमाथि संघीयतालाई नै धरापमा पारेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
संङीयता कार्यान्वयनमा सत्तारुढ दलकै शंका
संघीयताप्रति सत्तारूढ दलकै नेताले समेत सरकारी रवैयामाथि प्रश्न गर्ने गरेकाछन् । सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्डले गत वर्ष माघमा संघीयतामाथि खेलवाड भइरहेको भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका थिए ।
संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारको अभ्यास र प्रयासप्रति शंका व्यक्त गर्दै प्रचण्डले प्रश्न गरेका थिए, बिस्तारै बिस्तारै पुरानै संरचना र पुरानै तरिकालाई बलियो पार्नेतिर कतिपय कदमहरू अगाडि बढेका त होइनन् ?’
संविधान अनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा सरकारले उदासिनता देखाएकोप्रति शंका व्यक्त गर्दै प्रचण्डले प्रश्न गरेका थिए, ‘संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेर्दा स्थानीय तह, प्रादेशिक तहलाई संविधानले जुन मर्मका साथ व्यवस्था गरेको थियो, त्यो कार्यान्वयन हुँदै गएको छ त ? या बिस्तारै कमजोर पारिदै त छैन ?’
संविधानप्रदत्त अधिकार अनुसार प्रदेश २ ले प्रहरी र लोकसेवा सम्बन्धी कानून प्रदेश सभामा पेश गरेपछि संघ सरकार चिन्तित बन्यो ।
प्रदेश सरकारलाई तह लगाउने भन्दै प्रदेशले बनाउन लागेका कानूनमाथि बन्देज लगायो ।
त्यसपछि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सर्वाजनिक कार्यक्रममै भने, ‘संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्न नदिए संघ सरकारमाथि मुद्धा हाल्छु ।’
संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि कानुन बने तर, अधिकार पाइएन ।
२०७२ मा संविधान जारी भइसकेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलेको अध्ययनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि १ सय ३८ वटा कानुन बनाउनुपर्ने देखाएको थियो ।
मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न संघ सरकारका लागि १ सय १० वटा, प्रदेश सरकारका लागि २२ वटा र स्थानीय सरकारका लागि ६ वटा कानन बनाउनुपर्ने थियो ।
यस बाहेक केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य संरचनालाई मात्र सम्बोधन गर्ने ३ सय १५ वटा ऐन र २ सय ७० वटा नियमावलीमा धेर,थोर संसोधन गनुपर्ने थियो ।
पुराना ऐनलाई संविधान अनुकुल बनाउन भन्दै कानुन मन्त्रालयले १ सय ७० वटा ऐन केही नेपाल ऐन संसोधबाट संसोधन गर्नुपर्ने ।
४० वटा नयाँ ऐन बनाउनुपर्ने । १९ वटा ऐन प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने कानुन मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको थियो ।
यस बाहेक संघ सरकारले स्थानीय सरकारका लागि ११ वटा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने थियो । प्रदेशले स्थानीय सरकारका लागि ३ वटा कानुन बनाउनुपर्ने थियो ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि १ सय ३४ वटा कानुन संविधान अुनसार बनिसकेका छन् । बाँकी कानुन संसदमा विचाराधीन छन् । कतिपय कानुनको मस्यौदा तयार हुँदैछ ।
मन्त्रालयका उपसचिव कमलराज गौतमका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि चाहिने मुख्य मुख्य कानुन तयार भइसकेका छन् । ‘मुख्य–मुख्य कानुन बनिसकेका छन् । अन्य कानुन आवश्यकता अनुसार बन्ने प्रक्रियामा छन् ।’ उपसचिव गौतमले भने ।
उपसचिव गौतमका अनुसार प्रदेशलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक कानुन अझै बनेका छैनन् । प्रदेशलाई सम्बोधन गर्ने कानुन बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताउँछन गौतम ।
तथ्याकंमा निर्माण भएका कानुनको संख्या धेरै देखिएपनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा ४२ वटा कानुन अझै विचाराधीन छन् । कतिपय विधेयकमाथि छलफल पनि सुरु भएको छैन् ।
संख्यामा प्रसस्तै कानुन निर्माण भएको देखिएपनि, निर्माण भएका कानुनले संघीयताको मर्म समेटन नसकेको बताउँछन संविधानविद्ध रमण श्रेष्ठ । संघीयताको सुपर स्ट्रक्चर अर्थात उपरी संरचनामा मात्रै काम भएको श्रेष्ठको भनाई छ ।
उनी भन्छन, ‘संघीयताको उपरी संरचनामा मात्रै काम भएको छ । संघीयताको मर्म अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएको छैन ।’ संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले पाउनुपर्ने अधिकार अझै नपाएको बताउँछन् श्रेष्ठ । श्रेष्ठ भन्छन, ‘संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसार संघीयताको अभ्यास नै भएको छैन् । यस अर्थमा संविधान पूर्णत लागु भएको छैन ।’
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६, २१:१४:००